विवाहपछिको जीवन : “मलाई उहाँले यसरी दौरा सुरुवाल लगाउन पाउनु होला जस्तो लागेको थिएन” « ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
उहाँले जेल जीवनमा भोगेका दुई जना डाक्टरहरूको विपरीत अलग अलग चरित्रको बेलाबेला प्रसङ्ग ल्याउनुहुन्छ । अति खराब, दुष्ट र मानवीय भावना पटक्कै नभएका डा. आनन्दबहादुर श्रेष्ठ र डाक्टरी पेसाको ख्याल गर्ने र मानवीय भावना भएका डा. पुस्कर भारती थिए रे । डा. भारतीले डाक्टरको धर्म उपचार गर्नु हो भनेर केपीजीलाई केही औषधिका ‘प्रेस्किप्सन’ लेखिदिँदा डा.आनन्द बहादुर श्रेष्ठले त्यसलाई च्यातिदिएको र डा. भारतीलाई जनकपुरमा सरुवा गरिदिएको घटना उहाँले मलाई सुनाउनुभएको थियो । यस्ता डाक्टर, जसले आफ्नो पेशागत धर्म छोडेर सत्ताको लालचमा मानवमाथि अत्याचार गर्दारहेछन् । हुनत, त्यसबेलाको पञ्चायती सत्ताको लालचमा परेका डाक्टरको के कुरा गर्नु, आज पनि केपीजीको स्वास्थ्यलाई लिएर राजनीति गरिरहेका देखिन्छन् । तर, उहाँको स्वास्थ्यनिरङ्कुश व्यवस्था विरुद्ध संघर्षपूर्ण राजनीतिक यात्राकै कारण कमजोर बनेको हो । यस यथार्थलाई बुझेर उहाँको स्वास्थ्यमाथि राजनीति नगरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लागिरहन्छ ।
यसरी न्यूयोर्क अवतरण गर्नासाथ संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवसँगको भेट र मिटिङ्मा सहभागी बन्नुभयो । यसबेला उहाँ आइक्यापको सदस्यको नाताले उक्त मिटिङ्मा सहभागी हुनुपर्ने थियो । त्यसको भोलिपल्ट नै पाँच घन्टाको हवाइयात्रा गरेर मेक्सिको पुग्नुभयो र केही मिटिङ्मा भाग लिनुभयो । तर उहाँको स्वास्थ्यस्थिति दयनीय बन्दै गइरहेको थियो । त्यसैले मेक्सिकोबाट तुरुन्त फिर्ता भई न्यूयोर्क पुग्नुभयो र न्यूयोर्कस्थित लेनोक्स हिल हस्पिटलमा भर्ना हुनुभयो । यसरी अमेरिकाको अस्पतालमा पनि एक हप्ता उपचार गर्नुभयो । तर पूरा निको भएन । अनि त्यहाँबाट डिस्चार्ज भएर न्यूयोर्कमा सञ्जय थापाजीको घरमा दुईचार दिन बसेर २०६९को दशैँ त्यहीँ मनाएर दिल्ली आउनुभयो ।
दिल्ली पुगेर डाक्टरसँग सम्पर्क गरी हामी एपोलो अस्पताल गयौँ । रगतदेखि सबै परीक्षणहरू गरायौँ । तर यहाँ पनि डाक्टरहरूले रोग केही छैन, अति कमजोर छ, आराम गरेपछि राम्रो हुन्छ भन्नुभयो । यदि आराम मात्र गर्ने हो भने आफ्नै ठाउँमा जाउँ भनेर हामी नेपाल फर्कियौँ । नेपाल फर्केको अर्को दिनदेखि उहाँको खोकी यसरी बढ्यो कि हेर्न नै गाह्रो भयो । त्यसपछि केही बोतल स्लाइन पानी चढाउनु प¥यो भनेर डाक्टर दिलिप शर्माको सल्लाह बमोजिम थापाथलीस्थित ‘ब्लु बर्ड क्लिनिक’मा लगियो र स्लाइन चलाइयो । तर स्थितिमा सुधार देखिएन । लगत्तै नर्भिक अस्पतालका डाक्टरलाई डा.दिलिपले बोलाउनुभयो । अनि उहाँले केपी सरलाई देख्नासाथ र जाँच गरिसकेपछि तुरुन्त एम्बुलेन्स बोलाएर नर्भिक अस्पताल पु¥याउन लगाउनुभयो ।
एयर एम्बुलेन्स्मा राजेशलाई साथमा पठाएर म र इन्द्र भण्डारी नियमित उडानबाट दिल्ली उड्याँै । हामी एयरपोर्टबाट सिधै अस्पताल गयौँ । तर हामी पुग्दासम्म पनि केपीजीलाई पु¥याएको थिएन । हामीलाई झन् बढी तनाव भयो । एयर एम्बुलेन्स् अवतरण हुन सकेन कि भन्ने पनि लाग्यो । दिल्लीस्थित मेदान्त अस्पताल बाहिर नेपाली साथीहरू र दूतावासका कर्मचारीहरू पनि प्रतीक्षारत थिए । उहाँलाई अस्पताल ल्याइपु¥याउँदाअँध्यारो भइसकेको थियो । जनकपुर निवासी उक्त अस्पतालमा कार्यरत एकजना टेक्निसियन भाइले भर्नाको लागि आवश्यक व्यवस्था गरिदिए । अनि राति हामी नजिकको गेस्ट रुममा गएर बस्यौँ ।
मेदान्त अस्पतालको वरिपरि विभिन्न स्तरका धेरै नै गेस्टहाउसहरू रहेछन् । हामी त्यहाँ पुग्नासाथै धेरै एजेण्टहरूले आ–आफ्नो गेस्टहाउसमा हामीलाई लैजाने प्रयास गरेका थिए । त्यसैले एपोलोमा उपचार गराउँदा जस्तो बस्नको लागि दुःख यहाँ भएन । ठिकै खालका दुई तीन वटा कोठा लिएका थियौँ । खाना पकाएर खाने ठाउँ र सामानहरू पनि थिए । साथै रेस्टुराँबाट मगाएर पनि खान सकिन्छ । खाने, बस्ने सवालमा यस पटक मैले धेरै दुःख भोग्नु परेन । उता बिरामीलाई सुरुदेखि नै ‘आइसीयु र सीसीयु’मा भर्ना गरेको हुनाले हामी कुरुवा बस्नु परेको थिएन । त्यहाँ प्रत्येक दिन दुई पल्ट दुई जना भिजिटरलाई मात्र अनुमति दिइएको हुन्छ । म प्रत्येक दिन भिन्न भिन्न व्यक्तिहरू पठाउँथेँ । म गेस्टहाउसमा बस्ने र सुत्ने अनि बिहानको खाजा खाएर हिँडेरै अस्पताल पुग्ने गर्थें । अनि अस्पतालको सेरोफेरोमै दिन बिताउने गर्दथेँ । खाली पैसा मात्र हुनुपर्दछ । चिया, कफी, स्न्याक्स् खाने, नास्ता र बिहान–बेलुकाको खाना खाने ठाउँहरूछुट्टाछुट्टै थिए । सरसफाइ पनि राम्रै छ । अस्पतालमा ओपीडी क्लिनिक वार्डहरू धेरै भएकोले दिनभरि नै मानिसहरूको चहल पहल बाक्लै हुने गथ्र्याे । अस्पताल आउने, जाने धेरै मानिसहरूमा खुट्टा दुख्ने समस्या छ कि भन्ने मलाई लागेको थियो । प्रायः मानिसहरूखुट्टा खोच्याउँदै हिँडेको देखिन्थ्यो । अलि पाका महिलाहरूलाई त हिँड्न समस्या देखिएको थियो ।
बाहिर हामी जस्ता विदेशकाबिरामी र उनीहरूका सहयोगीहरूका लागि काउन्सिलिङ् गर्ने, सुझाब लिने छुट्टै कोठा या युनिट पनि व्यवस्था रहेछ । त्यसैले पनि मलाई यहाँ धेरै कुराहरूमा सहयोग पुगेको छ । माथि वार्डमा केपीजीलाई राखेको ठाउँमा सिसा या प्लास्टिकले घेरिएको कोठा रहेछ । भर्ना गरेको तीन चार दिन हुँदा पनि स्वास्थ्यमा खासै सुधार नदेखिएपछि उहाँको मुख र घाँटीबाट मेसिन भित्र पठाएर छातीमा टाँस्सिएको खकार निकाली टेस्ट गर्नएकजना लेडिज डाक्टर तयारीका साथ आउनुभयो र फर्ममा सही गर्नमलाई बोलाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो कि उहाँको रोग के हो ? पत्ता लगाउनको लागि हामी ब्रोन्कोस्कोपी गर्न लागेका छौँ । एक त उहाँ मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको व्यक्ति, दोस्रो एकदम कमजोर अवस्था त्यसैले उहाँको खकार निकाल्ने क्रममा अप्ठेरो परेमा भेन्टीलेटरमा राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँ राखिसकेपछि जीवित फर्केर आउनेमा अली शङ्का हुन्छ भन्ने ढंगले कुरा गरे । यी सबै कुरा सुनेपछि मैले फर्ममा सही गर्न सकिनँ । मैले आज नगरौँ म सबैसँग सल्लाह गर्छु र तपाईंलाई खबर गर्छु भनेँ । त्यसपछि डाक्टरको टोली फर्कियो ।
अघि डाक्टरको टोलीले भनेको कुराले मलाई ठूलो पहिरोले थिचेजस्तो भयो । अब भेन्टिलेटरमा राख्न दिनु भनेको सिधै फर्केर नआउने भनेजस्तो आशयको कुरा उनीहरूले गरे । त्यो कुराकानी सुनेदेखि नै आफूले टेकेको जमिन हल्लिएजस्तो भयो । खु्ट्टा लुलिएर थचक्क भइएला जस्तो भयो । वरिपरिको वातावरण एकतमासको लाग्यो, संसार फन्फनी घुमेजस्तो भयो । म रोउँ कि, यहीँ थचक्कै बसुँ कि । रोएरसमस्या समाधान हुने त होइन । तर, परिस्थिति त्यस्तो भएपछि तर्कले काम गर्दाे रहेनछ । रोएर केही हुन्न भन्दाभन्दै म धेरै रोएँ । रातभर आँखा झिमिक्क भएन । काठमाडौंमा पार्टीका साथीहरू, मैले चिनेका डा. दिलिपकुमार शर्मा र डा. कैलाश भण्डारी, दिल्लीका डा.अखिलेश्वर मिश्र, डा.अनन्त, डा. राजिव शर्मा आदिलाई फोन गरेँ । उनीहरूसँग सल्लाह मागेँ । डा. दिलिप र डा. कैलाशलाई जसरी भएपनि तपाईहरू दिल्ली आउनु भनेर अनुरोध गरेँ । मध्यरातमा डा. राजिव र उहाँका म्याडम, डा.गीत मलाई भेट्न गेस्टहाउस आउनुभयो । नआत्तिन र धैर्य गर्न भन्नुभयो । भोलिपल्ट बिहानैको फ्लाइटबाट डा. दिलिप शर्मा र डा. कैलाश पनि दिल्ली पुग्नुभयो । हामी सबै भएर अस्पतालका प्रमुख डाक्टरसँग कुरा ग¥यौँ ।
हामी करिबदुई हप्ता डाक्टर शर्माको निवासमा बस्यौँ । यस बीचमा दुई तीन पटक फलोअपमा अस्पतालमा गयौँ । यस अवधिमा केपीजीले निकै कम व्यक्तिहरूलाई मात्र भेटघाट गर्नुभयो । २०६९ को लक्ष्मीपूजाको दिन हामी शर्माजीकै घरमा थियौँ । उहाँहरूको लक्ष्मीपूजामा एकजना पण्डित बोलाएर छोटो पूजापाठ गरिएको थियो । त्यहाँ लक्ष्मीपूजामा छरछिमेकी र आफन्तबीच मिठाई उपहार दिने चलन रहेछ । त्यसैले हामीले त्यतिबेला धेरैथरीका धेरै मिठाई पनि खायौँ । बाहिर पटाका पड्काउने धेरै हुँदा रहेछन् । तिहार भए पनि अन्य चहलपहल खास देखिएन । यसरी यसपटक पनि करिबएक महिना दिल्ली बसेर हामी काठमाडौँ फर्कियौँ ।
२०७० मंसीरको चुनाब हुनु अगाडिदेखि नै उहाँको हातको छाला र औँलाहरू अलि अलि सुनिएजस्तो, छाला कालो भएजस्तो लक्षणहरू देखापरेका थिए । तर,चुनाबको चपेटाले गर्दा खासै ध्यान दिन सकिएन । चुनाबपछि २०७० फागुनमा टोखास्थित ग्राण्डी अस्पतालमा चेकअपको लागि जाने क्रममा भर्ना नै गरियो । यहाँ १०–१२ दिनको उपचारपछि घर आएर पुनः हामी लगत्तै दिल्लीको साकेतस्थित म्याक्सअस्पतालमा भर्ना भयौँ त्यहाँ एकमहिना लामो अस्पताल बसाईपछि बाहिर आएर थप दुई हप्ता दिल्ली बसेर २०७१ वैशाख ४ गते बुधबार तदनुसार १६ अप्रिल २०१४ मा मात्र नेपाल फर्केका थियौँ ।
काठमाडौँ एयरपोर्टमा नेता,कार्यकर्ता,परिवार, शुभचिन्तकको ठूलो समूहले स्वागत गरेका थिए । घर पुगेदेखि उही खालको भेटघाटको सिलसिला चलिहाल्यो । केही आराम मिल्ला कि भनेर दुई दिन गोकर्ण रिसोर्ट पनि गएर बस्यौँ । तर अर्को हप्ताको बिहिबार बेलुकादेखि उहाँलाई साह्रै टाउको दुख्यो, अनि लगातार वान्ता भयो । भोलिपल्ट डाक्टर ऋषि काफ्ले हाम्रो घरमै आएर जाँच गर्नुभयो । डा. काफ्लेले डिहाइड्रेसन छ, दुई तीन वटा स्लाइन चढाएपछि ठिक हुन्छ भनेर जानुभयो । दुई जना स्वास्थ्यकर्मी आएर स्लाइन चढाइयो र उपचार सुरु पनि भयो । तर बेलुका सम्ममा पनि कुनै सुधार देखिएन । राति फेरि डाक्टर दिलिप र डाक्टर कैलाश र अरु पनि आएर हेर्नुभयो । उहाँहरूले स्लाइन थप्दै लैजानुभयो । तर टाउको दुखाइ र वान्ता रोकिएन । यसरी शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म घरमा राखेर उपचार गर्दा पनि सुधार नदेखिएपछि डा.ऋषि काफ्ले, डा. दिव्या सिंह, डा. मुकुन्द सबैको सुझाब अनुसार आइतबार राति त्रिवि शिक्षण अस्पताल लगियो ।
अस्पताल पुगेपछि राति नै सीटीस्क्यान र ढाडबाट पानी निकाल्ने र अन्य परीक्षण सुरु गरियो । ती परीक्षणहरूमध्ये ढाडबाट निकालिएको पानीको जाँचबाट उहाँलाई क्रिप्टोकोर्स मेनेन्जाइटिक्स् भनेर चिनिने कडा रोग लागेको छ भन्ने पत्ता लाग्यो र रातिबाट नै उपचार सुरु गरियो । एमआरआई पनि गरी हेरियो । अरु रिपोर्टस् नराम्रो थिएन । यसरी फेरि अर्को कडा खालको अर्थात्बढी जोखिमयुक्त रोगले उहाँलाई दुःख दियो । टिचिङ अस्पतालमै रोग पत्ता लगाई उपचार सुरु भएको भए पनि अन्त्यमा उहाँलाई बैंककको वुङरुङगार्ड अस्पताल लाने निर्णय गरी एयर एम्बुलेन्स बोलाइयो । यस्तो निर्णय गर्नुमा मूलतः अस्पतालमा भेट्न आउनेको भीड, अस्पतालभित्र हुने फोहोरी राजनीति र उहाँको जटिल रोगहरूको कारणलाई ध्यानमा राखिएको थियो ।
डाक्टरहरू, नेपाल सरकार र नेकपा (एमाले)का प्रतिनिधिबीच गहन छलफल गरी जोखिम न्युनीकरणका लागि बैंकक लाने निर्णय भएको थियो । सोही निर्णय अनुसार २०७१ वैशाख १७ गते टिचिङ अस्पतालबाट सिधै एयरपोर्ट पु¥याएर एयर एम्बुलेन्सबाट बैंकक लगिएको थियो । जहाजमा उतैबाट आएका तीनजना स्वास्थ्यकर्मी र यताबाट बिरामीसहित डा. दिव्या सिंह शाह र राजेश वज्राचार्य गएका थिए । तीन घन्टाको हवाई यात्रापछि उहाँलाई अस्पताल पु¥याएर भर्ना गरियो । त्यस रात राजेश उहाँको साथमै बसे र डा. दिव्या सिंह शाह नेपाली दूतावासमा गएर सुत्नुभयो । जहाजमा केपीजीले जापानिज खाना सुसी खानुभएको थियो रे ।
काठमाडौंको एयरपोर्टभित्र टीजीको बिजनेस क्लासको लागि एउटा भव्यलन्ज र रेष्टुरेन्ट रहेछ । आफूमा पैदा भएको बेचैनी र छटपटीले, यो मैले पछि मात्र याद गरेँ । पहिलो पटक नेपालको एयरपोर्टभित्र पनि यस्तो स्थान देख्न पाएको थिएँ । जहाज अवतरण हुने समयमा ठूलो पानी पर्नाले बोर्डिङ पास केही ढिलो भयो । अन्त्यमा दिउँसोदुई बजेतिर जहाज उड्यो ।
जहाजको यात्रा अवधिभर मनमा अनेकौँ शङ्का र डर बोकेर बसिरहेँ । बैंकक पुगेर एयरपोर्टका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सिधै अस्पताल गएँ । म अस्पताल पुग्दासाँझको ७ बजिसकेको थियो । हतपत उहाँलाई राखिएको कोठा नम्बर ११११ मा पसेँ र उहाँलाई हेरेँ । म आइपुगेँ भनेर जानकारी दिन खोजेँ । तर उहाँ अर्धचेत अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो । कोठामा डा. दिव्या सिंह, सुरज र जेनी थिए । उहाँको स्थिति राम्रो छ जस्तो लागेन । आखिर जे भए पनि सहनु बाहेक मेरो सामु अरु बिकल्प थिएन । यसैबीच डा. दिव्या सिंह शनिबार बिहान नेपाल फर्कने कुरा भयो । अनि मलाई लाग्यो कि त्यहाँका डाक्टरहरूसँग कुरा गर्नका लागि भए पनि हाम्रो साथमा एकजना नेपाली डाक्टर हुनुपर्छ । यो अनुभव मैले पहिले पनि गरिसकेकी थिएँ । त्यसैले मैले डा.दिलिपलाई शुक्रबार नै बैंकक बोलाएँ । राति मलाई खान र सुत्न सुरजको घरमा बोलाइएको थियो । उहाँको स्थिति नाजुक भएकोले म गइनँ । बरु आफू रातभर बसेँ र राजेशलाई सुत्न दिएँ ।
अस्पताल बसुञ्जेल मेरो र राजेशको बास अस्पतालको सोफामै भयो ।राति एक दुई बजेसम्म एक जना सुत्ने अर्कोले कुर्ने, अनि बिहानसम्म अर्को सुत्ने गरेर हामीले समय मिलाएका थियौँ । एक हप्ता जति पछि मेरो र राजेशको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर रातको लागि एकजनानर्सको व्यवस्था गर्न लगाएँ । ती नर्स यस अस्पतालको स्टाफ थिइनन् । सुरुको अवस्थामा त्यहाँका डाक्टरहरूले केपीजीको बाँच्ने सम्भावना २० प्रतिशत मात्र छ भनेका थिए । हुन पनि अस्पतालमा हुँदा समेत धेरै दिनसम्म उहाँलाई टाउको दुख्न निको भएन । उहाँको टाउको दुखेका बेला हामीलाई हेर्न र सहन समेत निकै गाह्रो हुन्थ्यो । तर,त्यो पीडादायी दृश्य हेर्नु पर्ने बाध्यता थियो । एक पटक उहाँको ढाडबाट पानी निकाल्दा दुखेर उहाँ जोडजोडले कराउनुभो । त्यसबेला मेरो छाती नै फुट्ला जस्तो भयो । सायद,पानी निकाल्ने डाक्टर अलि नयाँ थिए कि ? नत्र त्यति साह्रो कराएको मलाई कहिल्यै अनुभव छैन । उहाँ अर्धचेत अवस्थामै हुनुहुन्थ्यो । अनि अस्पतालका कोठाको भित्तामा झुण्ड्याइएका तस्बिरहरू हेरेर तिनीहरूलाई बामदेव गौतम, विष्णु पौडेल आदिको तस्बिर भन्नुहुन्थ्यो । यसरी स्मरणशक्ति पनि हराएको थियो । यस स्थितिमा एक हिसाबले उहाँको आश मैले गुमाइसकेकी थिएँ ।
ब्यागमा मेरो सम्पूर्ण पैसा, गहना, मोबाइल, पासपोर्ट, चस्मा आदि थिए । म सधैँ जहाँ पनि प्राइभेट गाडीमा हिँड्ने भएर ब्याग सुरक्षित ढंगले बोक्नुपर्छ भन्ने ख्यालै भएन । दोस्रो,बैंककमा दिउँसै लुटिन्छ भन्ने सोच्नै सकिन । तेस्रो, श्रीमानको हालतले गर्दा मेरो होस ठेगानामा थिएन कि जस्तो पनि लाग्छ । जेहोस्, जिन्दगीमा पहिलो पटक धेरै सम्पत्ति गुमाउनु प¥यो । यसरी बाटोमा लुटिएपछि मैले जेनी र सुरजलाई घटनाको जानकारी गराएँ । पछि सुरज, दिनेश, निता र सुनील घटनास्थल आइपुगे र रिपोर्ट दिन भनेर पुलिस स्टेसन पुगे । थाइ भाषा जान्ने निताले सबै विवरण सहित निवेदन दिइन् । भोलिपल्ट पनि म एक चोटि पुलिस स्टेसन गएँ । तर सामान फिर्ता आउने सम्भावना देखिएन । यसरी दुःखमाथि दुःख बेहोर्नु प¥यो । तर मैले यो कुराको जानकारी केपीजीलाई दिइन ।
हामी अस्पतालको स्वीट रुममा बसेको हुनाले खान,बस्न,आराम गर्न नुहाइधुवाइ गर्न समस्या थिएन । अस्पतालमा नर्सिङ सेवा धेरै राम्रो थियो । सरसफाइ शिष्टता पनि त्यस्तै राम्रो थियो । आवश्यक सामग्रीहरू पानी, जुस, चिया, कफी, टावेल आदि मनग्य छन् । खाना तताउने ओभन, पानी उमाल्ने भाँडो, खाना खाने प्लेट, चम्चा, कचौरा आदि सबै छन् । नाम मात्र अस्पताल, सुविधा सबै स्टार होटलको भन्दा कम छैन । मे ६ तारिखको साँझ दूतावासका डीसीएम डोरनाथजी आएर औपचारिक रूपमा डाक्टरसँग कुरा गर्नुभयो । डाक्टरले अहिलेको लागि खतरामुक्त छ भनेर रिपोर्ट गरे । यसपछि अलि आशा पलायो । तर पनि कहिलेकाहीँ एक्लै हुँदा बिरामी कुर्न गाह्रो छ । बेडबाट खस्ने, लड्ने हो कि भनेर सधैँ सतर्क हुनु जरुरी छ । उहाँले ७ मे को बिहान उठेर ट्वाइलेटमै गएर दिसा, पिसाब गर्नुभयो । सायद दुई महिनापछि चियरमा बसेर भए पनि नुहाउनुभयो । बाथरुमदेखि सोफासम्म वाकरको सहायताले हिँडेर जान्छु भन्नुभयो । खाना पनि अलि खानुभयो । ६ मे मा वान्ता पनि भएन । ५ मे मा ढाडबाट निकालिएको पानीमा इन्फेक्सन छैन भनेर खबर आयो । अस्पतालमा भेट्न आउने साथीभाइहरू नेपालका नेता, कर्मचारी आदिको बारेमा आपसमा खुलेर गफ गर्छन् । हामीले कुरा नगरे पनि समय बिताउन सजिलो नै थियो ।
मे ८ तारिखको बिहान काँग्रेस पार्टीकी नेता मैयाँदेवी श्रेष्ठ र उहाँका सहयोगीहरू केपीजीलाई भेट्न आउनुभयो । श्रेष्ठजी स्वयं महिनाको एक पटक फलोअपको लागि यहाँ आउने गर्नुहुँदो रहेछ । उहाँले यो राम्रो अस्पताल हो, अस्ति नै केपीजीलाई यहाँ ल्याउनु पर्ने भनेर कराउनुभयो । तपाईंले नेपालमा धेरै गर्नु छ, तपाईं साँच्चैको नेता हुनुहुन्छ भनेर बूढी मान्छे भावुक हुनुभयो । उहाँको साथमा अरु तीन जना सहयोगीहरू थिए ।
आज पनि केपीजीको अवस्था राम्रै रह्यो । नुहाउने, खाने राम्रो भएको छ । आज थाइल्याण्डमा प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरी सैनिक शासन लागू गरेको हुनाले बाहिरी वातावरण अलि तनावपूर्ण होला । तर नेपालमा जस्तो उथलपुथलको स्थिति यहाँ भएको सुनिएन । मे ९ तारिखको बिहानै डा. दिलिप नेपाल फर्किनुभयो । उहाँको ठाउँमा डा. धर्मकान्त बास्कोटा दिल्ली हुँदै बैंकक आउनुभयो । तर आज खाना खाएपछि केपीजीले वान्ता गर्नुभयो । त्यसले उहाँलाई झन् शिथिल बनायो । साँझ, हिमालय किचनबाट एक जना नेपालीले खानामा मम र रोटी लिएर आउनुभयो । उहाँ पहिले पनि भन्ते बौद्ध भिक्षुको रूपमा बैंकक आउनुभएको रहेछ । आज राति एक बजेदेखि बिहान सवा ५ बजेसम्म म बिरामीकै कोठामा बसेँ । उहाँले मलाई ‘तिमी यहीँ बस म सुत्न सक्दिनँ’ भन्नुभएको थियो । फेरि तिमीलाई धेरै दुःख भयो भनेर चिन्ता पनि गर्नुभयो ।
यता उचपार खर्च सरकारले दिने निर्णय भए पनि आजसम्म कुनै रकम नपठाउँदा ठूलो तनाव भइरहेको थियो । एयर एम्बुलेन्सको समेत भुक्तानी भएको छैन । यसैबीच इन्फेक्सन्स् हेर्ने फिजिसियन डाक्टर बिहानै आउनुभयो । हिजोेको रिपोर्ट राम्रो छ भन्नुभयो । यहाँ आएदेखि तीन पल्ट ढाडबाट पानी निकालेर गर्ने टेस्ट गरिसकेको छ । फेरि घरीघरी म आँखादेख्दिन भन्नुहुन्छ । त्यसैले आँखाको चेकअपको लागि सम्बन्धित विभागमा लगियो ।
१७–१८ दिनपछि आज बिहानदेखि उहाँलाई राम्रो भएको छ । पटक पटक खाना खाने, आफैँले दिसा धुने पनि गर्नुभयो । सबैभन्दा खुसीको कुरा त आज मलाई मेरो नामबाट नै बोलाउनुभयो । उहाँ सधैँ मलाई नानी भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो । तर मलाई आज ‘राधिका कटनवर्ड देउ त’ भन्नुभयो । आज उहाँको टाउको, काँध, शरीर केही पनि दुखेको छैन । यता रगत जाँचको रिपोर्ट पनि हिजोको तुलनामा राम्रो आयो । मुलतः उहाँलाई मिर्गौला विशेषज्ञ नसा रोग विशेषज्ञ, जनरल फिजिसियन, चिनीरोग विशेषज्ञ, संक्रामक रोग विशेषज्ञ र रिह्याविलिटेसन विशेषज्ञ आदिले जाँच गर्नुहुन्थ्यो ।
१३ मे थाइल्याण्डमा वैशाख‘डे’को सार्वजनिक बिदा रहेछ । यसैको अवसरमा नेपाली दूतावासले साँझ पटायामा कार्यक्रम राखेको रहेछ । आज उहाँले पहिलो पल्ट बालकोटमा निर्माणाधीन घरको छत ढलानमा वाटरप्रुफ राखेको छ कि छैन भनेर मसँग सोध्नुभयो । यसको अर्थ उहाँको स्मरणशक्ति बढ्दै छ । मोबाइलबाट नेपाल सम्बन्धी केही समाचार सुन्नुभयो । कोठामा भएका किताबबाट कथाहरू पनि पढ्नुभयो । राति ड्युटीमा आएकी एक जना नर्स अलि बढी चकचके र गफाडी रहिछन् । राति १२ देखि एक बजेसम्म ब्रेक टाइम भनेर उनी बाहिर गइन् । २८ वर्षकी ती नर्सले फिलिपिन्समा तीनवर्ष र ताइवानमा दुईवर्ष काम गरिसकेँ भनिन् । उनको चञ्चले स्वभाव र एक घन्टा ब्रेक टाइमले गर्दा आजको रात म सुत्न पाइन । मे १४ तारिखमा नेपालमा बुद्ध जयन्तिको सार्वजनिक बिदा थियो । सबै काम, कुरा राम्ररी नै चलिरहेको थियो ।
१८ मेको दिन बिहान७ बजेदेखि दिउँसो एक बजेसम्म म आफ्नै सामान्य स्वास्थ्य परीक्षणका लागि व्यस्त भएँ । साँझ मैले टाउको अलि भारी छ भनेपछि उहाँले चिन्ता गर्नुभयो । अनि उहाँलाई सान्त्वना दिन पनि मैले आफू फ्रेस भएको देखाउनु प¥यो । धेरै लामो समयको अस्पताल बसाइ र चिन्ताले गर्दा अलि बिसञ्चो होला कि भन्ने डर मनमा त थियो नै । १९ मेको दिन डा. शक्ति बस्नेत आएर किड्नी फाउण्डेसनको तर्फबाट शीघ्र स्वास्थ्यलाभको फ्रेम सहितको पत्र दिएर जानुभयो । उहाँले हिजो ‘विकेन मार्केट’ जाँदा मोबाइल हराएको कुरा गर्नुभयो । आज मैले उहाँको क्यानेला राखेको ठाउँमा ड्रेसिङ् गरिदिएँ । यस्तैमा एकाउन्ट युनिटका एक जना स्टाफ आएर पैसा धेरै बाँकी देखियो, केही भए पनि आजै जम्मा गरिदिनु भनेर गए । त्यसपछि मैले दूतावासमा फोन गरेर यो जानकारी दिएँ । यता दिनको दुई पल्टको फिजियोथेरापीले उहाँलाई राम्रो हुँदै गइरहेको थियो । आजदेखि रातिको ड्युटीमा थाई नर्स नै आइन् । फिलिपिनो नर्ससँग व्यवस्थापनको केही समस्या प¥योजस्तो लाग्छ । फिलिपिनोहरू खर्च कम गर्न शहरी क्षेत्रभन्दा टाढा बस्ने गर्दछन् रे भन्ने सुनेकी थिएँ ।
नेपाल टेलिभिजनको आजको एउटा अन्तरवार्तामा एमालेका नेता जगन्नाथ खतिवडाको कुरा सुनेँ । उनले केपी ओली मर्न मात्र बाँकी भएको, तुरुन्तै मरिहाल्ने, महाधिवेशनमा यस्तालाई नेतृत्व दिनु हुँदैन आदि आदि कुरा गरेर पार्टीका कार्यकर्तालाई माधव नेपालतिर आउन भनेका रहेछन् । केपीजीको स्वास्थ्यलाई लिएर भइरहेको राजनीति देख्दा मलाई साह्रै दुःख लाग्यो । माधव नेपाल, जसको सधैँभरिपार्टीको उपल्लो स्थानमा रहेर आफ्ना आसेपासेलाई सधैँ अवसर दिने र अलिकति मात्र असहमति जनाउनेलाई जिन्दगीभर उठ्न नदिने प्रवृत्ति थियो । आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न, टिकाउन र महासचिव बनाउन ठूलो सहयोग गर्ने साथीप्रतिको उहाँको व्यवहार हेर्दा र भनाइहरू सुन्दा मात्र पनि दिक्क लाग्छ । उहाँकै एकल महासचिवको पार्टी ब्युरोक्रेसीले चाकरी गर्नेलाई अवसर दिलाउन र फरक मत राख्नेलाई बोल्न समेत प्रतिबन्ध लगाउने गथ्र्याे । यसरी तेस्रो कार्यकालसम्म पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएका उहाँ एक पटक पनि पार्टीको नेतृत्व नगर्नुभएका केपीजीमाथि महाधिवेशनको मुखमा स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा पनि आक्रमणमा उत्रनुभयो । यसबाट दुःखी हुनु बाहेक के गर्न सकिन्छ र ?
२२ मेको दिन दिउँसो१२ बजेदेखि एक बजेसम्म केपीजीले अन्नपूर्ण पोष्टका लागि दिल्लीमै बसेर अन्तरवार्ता दिनुभयो । राति १० बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म बैंककमा कफ्र्यू थियो । यसले म्याक डोनाल्डसम्म बन्द भयो । राति डा. गोपाल सिवाकोटी पनि भेट्न आउनु भएको थियो । फोनमा माधव ढुंगेलसँग नेपालमा कुरा गरेँ । केपीजीले गृहमन्त्री बामदेव गौतमजीसँग कुरा गर्नुभयो ।
अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएर बाहिर आउँदा साँझको साढे ६ भइसकेको थियो । त्यसपछि हामी नेपाली दूतावास सुकुमबिट रोडसोइ ७१ मा आयौँ । यहाँ पनि चैनसँग बस्न नदिनेहरू निस्किए । अस्पतालमै थप समय बस्नुपर्छ भनेर जिद्दी गर्नेहरू पनि निस्किए । हामी आफ्नो निर्णय आफैँ गर्ने भन्दा पनि अरुको इच्छा अनुसार चल्नुपर्ने जस्तो भयो । यसले मलाई बिथोलिरहेको थियो । दूतावास पुगेर केपीजीलाई अलिकति खानेकुरा दिएर अगाडिको जस्कोमा गएर केही खानेकुरा किनेर ल्याएँ । हतार हतार गरी दाल,भात तरकारी पकाएँ, ख्वाएँ र खाएँ । कोठाभरि छरिएका सामानहरू मिलाएँ । औषधिको काम राजेशले गरे । अन्त्यमा रातको १२ बजेपछि सुतेँ । तर उहाँलाई ट्वाइलेट लानको लागि छिनछिनमा उठिरहनु पर्छ ।
शुक्रबार डिस्चार्ज भएर फर्केपछि आज बुधबार बिहानसाढे ९ बजे अस्पताल पुगेँ । रगत जचाउन दिएँ । मिर्गौलाका डाक्टर सिरासँगको अपोइन्टमेन्ट दिउँसो पौने १२ बजे मात्र भएकोले अस्पतालमै बसिरहेँ । डा. सिरासँग जचाइसकेपछि फेरि अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने भनियो । पोटासियम ६ दशमलव ५, क्रेटिना २ दशमलव १ र ड्रगलेभल १२ देखिएकाले भर्ना हुनु परेको हो । डक्टरका अनुसार पोटासियम बढी भएमा मुटुलाई धेरै जोखिम हुन्छ । बिरामी मर्न पनि सक्छ भनेर डाक्टरले डर देखाए । त्यसपछि सीसीयुमा भर्ना गर्न बेडको खोजी भयो । त्यहाँ नपाएर आइसीयुमा लगेर राखियो । उता अस्पतालको लेखा शाखामा जाँदा तत्कालै दुई लाख भाट जम्मा गर्नुपर्छ भन्यो । हामीले उक्त रकम जम्मा गर्न सकेनौँ । तर, नेपाली दूतावासबाट आएको भनेर भर्ना ग¥यो । भर्नापछि उहाँलाई आइसीयुको ५२६ नम्बर कोठामा राखेर हामीले फूडकोर्टमा गएर अलिकति खानेकुरा खायौँ ।
त्यसपछि हामी ३१ मे र १ जुनमा फिजियोथेरापीको लागि अस्पताल गयौँ । दुई जुनमा फेरि परीक्षण गरायौँ । आजको रिपोर्ट अलि राम्रो आएको हुनाले धेरै दिनपछि हामीले आनन्दले स्वाद लिएर खाना खायौँ ।यसरी ठूलो सङ्कट पार गरी २० जेठ २०७१ को दिन हामी बैंककबाट काठमाडौंँ फक्र्याैं । फर्कदा काठमाडौंको विमानस्थलमा धेरै साथीभाइ र आफन्तहरूले स्वागत गरेका थिए । घर फर्केपछि त्यही साँझ झलनाथजी र विष्णु पौडेलजी भेट्न घरमा आउनुभयो । विष्णुजीले मेरो साहस र धैर्यताको प्रशंसा गर्नुभयो । भोलिपल्ट मैले काठमाडौंमै उहाँको रगत जचाएँ । रिपोर्टमा के ५ दशमलव ६ देखियो । उहाँले राति पेट र छाती दुख्यो भन्नुभयो । राति डाक्टर दिलिप शर्मालाई लिन पठाएँ । उहाँ आएर हेरेपछि रातको तीन बजेतिर केपीजी निदाउनुभयो । सोमबार डा. दिव्या आएर जाँच गर्नुभयो ।
धेरै दिनपछि २६ जेठ २०७१ को दिन काठमाडौंको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्न जाने भनेर उहाँले दौरासुरुवाल, कोट र टोपी लगाउन खोज्नुभयो । यसबेला मेरा आँखाबाट हर्षका आँशु बग्नथाले । मलाई उहाँले यसरी दौरा सुरुवाल लगाउन पाउनु होला जस्तो लागेको थिएन । पछि २०७३/०७४ सालतिर उहाँको हर्नियाको अपरेसन गर्न उही बुमरुङगार्ड अस्पताल बैंककमा चार पाँच दिन बसेका थियौँ । उक्त समयमा एउटा औषधि समयमा खान छोड्दा मुटुको चाल बढेर एक दुई घन्टा थप समय ‘अपरेसन पोस्टवार्ड’मा बस्नु परेको थियो ।